Rental fekitori uye vanotengesa | Kupenya
Njenjemera akatungamirira Screen
Njenjemera akatungamirira Poster
Creative akatungamirira Screen
Flexible LED kuratidzwa
Yakagadziriswa Ratidziro ye LED
Yakanaka Pitch LED kuratidzwa
Indoor akatungamirira Ratidza
Kunze kweDisplay Display
Kasino uye Magemikari Maindasitiri
Unique, vakagwinya zviitiko zvose vane chinhu chimwe chete chakafanana: vanotanga vaine chiono kukuru. Zvii Uri kushandisa nechokwadi chokuti chiitiko wako chinogombedzera, vachiita, uye chisingakanganwiki vanenge varipo? Akatungamirira Video sikirini Rental ndechimwe kukurumidza kuwedzera munzvimbo dziri mhenyu kugadzirwa uye chiitiko Mazinga. Chakawedzera unhu uye divi kuti chiitiko chako kumbova nyore. Akatungamirira Matafura vari nezviripo pachisikirwo uye kunogona configured kushumira zvinoverengeka zvakasiyana mashandiro ari maduku, unosvikirwa, uye setups makuru. Pamwe yedu Rental kugadzirwa Network vadiwa, Penyai akatungamirira akagadzirira kukubatsira tora chiitiko Kugadzirwa yenyu ngairarame unotevera padanho pamwe akatungamirira yeClearType.
Sezvo indasitiri inoramba ichishanduka uye chiitiko kugadzirwa michina zvikamuka, nokusingaperi-kukura chigadzirwa mitsetse RadiantLED anopa zvisingaperi negadziriso zvose zvaunoda okusika, pamwe curvable akatungamirira sefa, configurations zvitsva, uye anoratidza kuti anogona zvakagadzirirwa chero yatingafungidzira saizi. Nepo vanhu vakawanda vanoona akatungamirira Video rusvingo Rentals chichibatsira konzati uye chiitiko marimba zviruva, chokwadi ndechokuti akatungamirira kuratidzirana inogona kushandiswa nenzira dzakasiyana-siyana mhenyu chiitiko yemugumo. Kutaura zvazviri, makambani akawanda vari kutendeukira kuna Rental akatungamirira sefa hwekutengeserana zvinoratidza matumba, yemakambani zviitiko uye misangano, uyewo mhenyu terevhizheni dzeredhiyo uye tapings.
Penyai akatungamirira ane misoro yokusvika kusanganisa akatungamirira Video chidzitiro Rental muruoko chiitiko wako ano kugadzirwa mazano. Tinogona kukubatsira kusika anoratidza yako kubva pakutanga kana kusvetuka muna chero nguva yacho kugadzirwa magadzirirwo muitiro kuitira pamusoro-weDanho unhu uye Urume aurayiwe mavhidhiyo kwenyu kwakaita rusvingo Rental kubvira pakutanga kusvikira pakupedzisira. Makore edu ruzivo makatipa ainyatsonzwisisa vasiri vanorega hunhu varaidzo kugadzirwa indasitiri. Kana nyaya kana mibvunzo inomuka pamusoro yedu akatungamirira vhidhiyo Rental mugadziriro, Penyai akatungamirira nemakasitoma vakasununguka kushandisa yedu yose, nzwisisika 24/7 anotsigira hurongwa.
Post nguva: Mar-28-2019
Floor 3, Kuvaka D, Yisong Ecological Technology Park, N.9 Jiejiabao Road, Baoan Distict, Shenzhen Guta, China